मनका लहर पानीमय भएका छन् । परिवेश र समय होलीमय बनेका छन् । रंगीन शुभकामना अनि उत्साहहरु रंगमय देखिएका छन् । हुनपनि निकै समय पश्चात् होली दैलौमा टेकेको अनुभव संगालीरहेको छु । होली रंगविहिन हुने कुरै भएन र यो मनविहिन हुनु पनि हुन्न । किनकी होलीमा आत्मियता पुवर्क एकअर्कामा मनका सम्बन्घ साटिन्छ सँगसँगै होलीका रंगहरु । यतिखेरको होली खुशी यसकारणले पनि होला ’cause म स्वदेशबाट दुई बसन्त बाहिरिएको थिए । तत्कालीन बिदेश बँसाईमा महसुस गरिनु त परि जाओस् । कहिले कुन पर्व आयो कुन गयो । अनभिज्ञ परिवेश उतै नेपालको विमानस्थलमा छोडेको थिए । विदेशमा आखिर के हुनु र आर्थिक उन्नतिका सोच अनि आरामीको कैयौ समयहरु । हुन त सहज पनि छैन विदेशमा काम । अपवाद भन्दा पनि हजारौ अनुमानबिनाको आँकडामा म प्रस्तुत भईरहेको छु अहिले यतिखेर ।
कहिल्यै पनि मिठा कुरा सुनाउन नथाकेका प्रेमी र सुन्न हतारिएका प्रेमिकाको असन्तुलित जोडीले राजधानीका दर्जनौं सम्पदा क्षेत्र प्रेममय स्थलमा परिणत भएको छ । खुल्लमखुल्ला बहकिएका अधैर्य जोडीहरुको आधुनिक लीलाका दृश्य हेर्ने नसकेर यात्रुहरु आफ्नै खुट्टाका जुक्ता हेरेर हिड्न बाध्य छन् भने सम्पदामा कोरिएका ऐतिहासिक देव आसनका यौन बुट्टाहरु जोडीका काल्पनिक साक्षी बनिरहेका छन् ।
सन्दर्भ होली कै हो । म होलीको हालखबरतिरै केन्द्रित हुन चाहन्छु । आज पनि बिहानी भयो । घामको आगमनसँगै छतमा स्थानीयहरु देखिएका छन् । तर हिजैको रुपमा होईन । आज हातमा बैलुन र प्लाष्टिक लिएर । अब वरिपरिबाट आक्रमणको बिगुल फुकियो । अनि हानाहान भयो बैलुनको । शहरमा देखिएको होलीको यो दृश्य गजब रमाईलो थियो । सदा पानीको समस्यामा कराउने र लँडाई गर्नेहरु छतमा बाल्टीनका बाल्टीन पानी ओसारेका थिए । त्यही टोल हो जुनले हरेकपटक पानीको समस्या देखाउँदै आएको थियो । जसका घरका धाराबाट पानी कमै मात्र आउँन्थ्यो । तर यस्तो पानी सदुपयोगले शहरबाट शब्दहरु कोर्ने बाध्य बनाएको छ । टोलकै ईनारबाट पनि पानी झिकिएको होला । तर त्यो ईनारको पानीले दैनिकी चल्दैन थियो । तर आज त्यही पानीबाट रमाएका थिए छतमा उत्रिएका युवा र युवतीका दर्जनौ जमात । सफासुग्घरको नारालाई प्राथमिकता दिने उनीहरु ईनारको त्यस्तो फोहरपानीमा रमाएका त थिएनन् । आफैलाई प्रश्न गर्ने बाध्य भएँ के प्रत्येक घरमा होली भनेर खानेपानीले पानी वितरण गरेको हो की वा घरघरमा मुहानै छ कतिका बैलुन निशानामय बन्यो । कतिका भने आत्मघाती पनि भए ।
This entry was posted on मार्च 2, 2010 at 3:08 अपराह्न and is filed under म र मेरो कुरा, मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.
ट्यागहरु: पानीको मुहान, होली